Farmaajo iyo Khayre iyo Madaxda maamul goboleeyda markii ay shirkii Garowe isugu yimaaden. qorshaha shirku wuxuu ahaa in laga wada hadlo, (Dawo) – Damqo
Farmaajo iyo Khayre iyo Madaxda maamul goboleeyda markii ay shirkii Garowe isugu yimaaden. qorshaha shirku wuxuu ahaa in laga wada hadlo, (Dawo)
Farmaajo iyo Khayre iyo Madaxda maamul goboleeyda markii ay shirkii Garowe isugu yimaaden. qorshaha shirku wuxuu ahaa in laga wada hadlo, dhamaystirka dastuurka qabyada ah, dejinta qorshaha qaybinta khayraadka dabiiciga ee wadanka, Dibu heshisiin loo sameeyo bulshada somaliyed, Sida doorasho hal hoq hal cod uga hirgeli karto somalia iyo arimo kale oo badan una ah muhiim wadanka.
Lakiin nasiib daro madaxda qaranka oo kala aha Madaxweynaha DFS iyo Ra’iisal wasaarihiisa waa ay diiden in laga hadlo arimahaas. Aniga shaqsi ahaan markaas ayey ii cadaatay in Farmaajo iyo Kheyre ay daba socdaan dano shaqsiyeed oo aysan wax dan ah ka lahayn somalia. Waxaa arintaa siifan igusii cadaatay markii werarka ay ku qaaden maamul goboleeyda oo ay qaar madax uga dhigeen dad iyaga u adeega sida wasiirki hore ee DFS oo laga dhigay madaxweynaha maamulka konfur galbeed.
La dagaalankii ay la galeen jubaland iyo qalalaasaha siyaasadeed ee hada laga dhex wado Galmudug. Nimankan waxay intaas u samaynayaan sidii ay 2020 ugu soo laaben lahaayen masraxa siyaasada ee somaliya.
Previous Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Misaniyada Dowlada 2020
Next Madaxweynaha Farmaajo oo maanta socdaal hal saacad ah ku tagay magaalada Baladweyne ( Dawo )